Bonke abazali bafuna ukuba abantwana babo bakhule kwaye baphumelele. Kodwa indlela yokufezekisa le nto, ngelishwa, bambalwa abazi. Lo mfihlelo ongenakunqwenela ubuye wafunyaniswa eJapan. Ukuba umntwana uyaphumelela, kuyimfuneko ukuyihlakulela ukususela kwiminyaka yokuqala, ukudibanisa izinto zezemveli kunye nezindlela zanamhlanje. Isifundo ngasinye sifanele sakhiwe ngokomgaqo "ukusuka kwizinto ezilula ukuya kunzima." Nguye othobela imfundo yabantwana baseJapan. Kwaye umphumo wale ndlela ihle kakhulu - abantwana baseJapan bafumana ngokukhawuleza izakhono eziyimfuneko zokufunda nokufunda ngempumelelo.
Ngaba ufuna abantwana bakho baphumelele kwakhona? Landela amanyathelo alula.
1. Ncedisa umntwana ukuba aphuhlise ukususela ebuntwaneni.
Ngokomphando kaGlen Doman kwiFiladelphia Institute for Development Development, umntu ufumana i-80% yazo zonke iinkcukacha ezisisiseko ebuntwaneni. Kwixesha lokufunda esikolweni, inkqubo yokufunda ihamba ngokukhawuleza. Ukuba abazali ngeli xesha baqala ukunceda umntwana - ijubane lokufunda luya kuba lukhulu kakhulu.
2. Sebenzisa indlela "inyathelo ngesinyathelo"
Yilokho abantwana abancinane abayidingayo. Ukuba abazali bafuna ukuphuhlisa isakhono esithile (fundisa umntwana ukuba abambe ipensele kakuhle, udwebe imigca, ubhale, ubale, unqumle), ungasebenzisa iinkqubo zophuhliso ezilungiselelwe.
Kusemgangathweni wokufunda "inyathelo ngesinyathelo" esekelwe kwinkqubo yokuphuhlisa kwiincwadi zeJapan zaseKimon. Ezi zinzuzo ezidumileyo kwihlabathi zavela eRashiya kuphela kunyaka odlulileyo kwaye ngokukhawuleza zaphumelela kubazali babo. Namhlanje, abantwana abayizigidi ezi-4 baqeqeshwa kumazwe angama-47.
Iiklasi zisekelwe ekuzalisekeni okuphindaphindiweyo kwemisebenzi efanayo, leyo, ngokuya ibe nzima ngakumbi, vumela umntwana ukuba aqonde kwaye adibanise izakhono ezifunyenweyo. Ukuqhubela phambili kumanyathelo amancinci, umntwana wakho uya kuphumelela ngokuqinisekileyo. Akayi kukwazi ukufumana izakhono ezithile kuphela, kodwa uya kuba nokunyamekela, azimele, athole ukuzithemba ngamakhono akhe. Kwaye izifundo ngokwazo ziya kumnceda kakhulu. Ukuvavanya ukuphumelela kweencwadana zaseJapane, unakho kwimisebenzi emininzi, umzekelo, inqaku elifutshane leencwadana.
3. Dumisani nangenxa yokufezekiswa okuncinci
Nangona impumelelo encinci yinyathelo elikhulu endleleni eya empumelelweni. Ungalibali ukudumisa umntwana kwaye ulungiselele impumelelo yakhe. Iincwadi ezininzi eziphuhlisayo zibonelela iithebhu ezizodwa kunye neetekisi zetyala okanye inkqubo yokufaka amanqaku. Ngokomzekelo, kwiincwadi zamanqaku e-Kumon kukho isatifiketi esikhethekileyo esinganikwa kumntwana emva kokugqiba yonke imisebenzi. Amabhaso amancinci anjalo akhulisa nje ukukhuthazwa komntwana, kodwa kwakhona ukuphucula ukuzithemba kwakhe.
4. Imisebenzi kufuneka ibe nandipha umdlalo
Ayikho imfihlo yokuba sikwazi ukukhumbula into esinomdla kuyo. Ngoko ke, nayiphi na imisebenzi kufuneka ibe nomdla kumntwana. Kungcono ukuba abantwana bafunde ulwazi kumdlalo. Kubaluleke kakhulu ukuba yonke imisebenzi ngeendlela enye okanye enye iquka izinto zezemidlalo, zisebenzisana. Umzekelo, unokumxelela umntwana malunga nendlela yokuchonga ixesha, okanye ungasebenzisa imisebenzi yemidlalo enomdla ngezandla zewashi, njengeencwadi ze-Kumon zokufundisa. Kwimeko yesibini, umntwana usenokuba nako ukufunda isakhono esitsha kwaye uya kufuna ukuqhubeka nokufunda.
5. Khuthaza ukuzimela kwabantwana
Kakade kwiminyaka emithathu umntwana uzama ukukhusela ukuzimela kwakhe, ngoku ngoku athi "mna!". Musa ukuphazamisa, ngokuchaseneyo, zama ukukhuthaza imizamo yakhe yokwenza konke ngokwakhe. Xa edonsa, ukubunjwa okanye ukudlala, zama ukungaziphazamisi kwinkqubo kwaye ke ngoko ungazami ukulungisa into ethile okanye ukufumana umphumo ontle. Wonke amanyathelo kwaye yonke impazamo yindlela eya kwimpumelelo yexesha elizayo.
Ngomgaqo ofanayo, iiklasi kwi-system ye-Kumon zakhiwe. Bahlakulela kubantwana umkhwa wezifundo ezichanekileyo, okuyimfuneko ekufundeni ngempumelelo. Yaye makumve ukuba umntwana unokukwazi ukufezekisa kakhulu. Ngoko ke, umntwana ulungele ngokuphindaphindiweyo ukufezekisa ezintsha.
Ungayifundisa njani umntwana imithetho yokukhuseleko eyisiseko?
Akunakuchukumisa umntwana kude naye: iimpazamo eziphambili zemfundo
Uhlobo oludumileyo kunye nobukhulu be-Ashley Graham lukhuphe iqoqo elitsha leengubo zangaphantsi
Inkukhu yenkomo kwi-multivariate
Kuthekani ukuba umntwana akanomdla kwiontanga?
Ukulungiselela izitya zokutya ekhaya
I-Sauce kwisaladi yamaGrike
Shchi kunye nenkomo
I-Confection ye-kiwi kunye ne-gooseberry
Ixesha lokuphila kwintsana engaphambi komntwana